Cristiano Ronaldo oo u jawaabaya Wasiirka Ciyaaraha ee Talyaaniga – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo u jawaabaya Wasiirka Ciyaaraha ee Talyaaniga
Dajiye October 16, 2020
(Turin) 16 Okt 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ka jawaabay eedeymaha wasiirka isboortiga Talyaaniga ee Vincenzo Spadafora.
Wasiirka isboortiga Talyaaniga ee Vincenzo Spadafora ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu jabiyay borotokoolkii caafimaadka, kaddib markii uu ka dhoofay dalka si uu u aado Portugal.
Weeraryahanka Kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la xaqiijiyey in laga helay Korona Fayras, inta uu ku sugnaa xerada tababarka ee xulkiisa qaranka Portugal oo ku gudi jiray diyaargarowga kulamada tartanka UEFA Nations League.
Cristiano Ronaldo ayaa fariin uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka, wuxuu ku sheegay:
“Qoyskeygu waxay ku sugan yihiin dabaq kale oo guriga ah. Lama xiriiri karno, mar walbana waxaan joogaa guriga si aan maalmaha u dhaafo. Waan ixtiraamayaa borotokoolka mana aanan ku xadgudbin waa been”.
“Waxaan ka soo laabtay dalka Portugal, sababtoo ah aniga iyo kooxdeyduba waxaan doonaynaa in aan u hoggaansano dhamaan nidaamka, waxaana ugu soo laabtay Talyaaniga anbalaas diyaaradeed, mana jirto cid aan la soo xidhiidhay xitaa magaalada Turin”.
Cristiano Ronaldo wuxuu tallo ka bixiyay sida looga gudbi karo Korona Fayras, wuxuuna yiri:
“Fayraskan waa mid khatar ah, waxaana rabaa inaan ku soo laabto sida ugu fiican, waxa ugu muhiimsan waa inaan helo fitamiin D, iyo inaan fariisto qorraxda maadaama ay caawineyso habka difaaca jirka, iyo inaan helo heer sare oo oo fitamiin C ah iyo sidoo kale daawada Omega 3”.
“Waxaad ubaahantahay inaad si fiican wax u cuntid oo aad jimicsi sameysid oo aad socotid, markaas aad ayey muhiim u tahay inaad xoogaa hurdo hesho, nasiib ayaan leeyahay maxaa yeelay waxan sameeyaa habeen kasta, waxaan seexdaa 8 ilaa 9 saacadood maalintii, waa tan ugu fiican daaweynta”.
Cristiano Ronaldo ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyay:
“Waxaas oo dhami waa lama huraan, marka lagu daro cunista cuntada iyo khudaar badan”.
Frank Lampard oo go'aamiyay xaallada Hakim Ziyech kahor kulanka Southampton
Tababare Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka Getafe